Service - Hangzhou Poly Air Kuparadzana Equipment Co., Ltd
Pre okutengesa basa
The mushandisi kana mamwe madhipatimendi muchokwadi, tsanangudzo okusuma nekambani zvigadzirwa, uye inopa kufanana hwokugadzira mashoko ndiyo akakwana, kubatsira magadzirirwo chikwata kuita zvekushandisa exchanges, kuteerera mushandisi uye kunenge kuMudzidzisi madhipatimendi, mu magadzirirwo uye gadzira zvigadzirwa maererano nemamiriro ezvinhu chaiwo, kuvandudza zvigadzirwa, kundosangana musoro zvinodiwa users.Provide muitiro musoro yavaive kune vanoshandisa maererano gasi ezvinhu.
In kutengeswa mabasa
It maererano akakodzera mitemo, mitemo nemirayiro yose ehurumende uye kodzero uye nokubatira kusaina chesungano mukanyatsochengeta zvinoenderana Pakuurayiwa contractperformance.- pashure chinobudirira musi chibvumirano kuti vanoshandisa uye Design Institute kuti provideequipment vanodhirowa uye hwakadzama ruzivo.
Midziyo The fekitari randomly pamwe chigadzirwa chitupa, kurongedza list, chitupa rokurohwa, chitupa kumanikidza mudziyo uye mirayiridzo kushandiswa.
Dzimbahwe kambani pashure pakutengeswa dhipatimendi, uye kugadzwa ofresident Mahofisi National Multi nharaunda, hofisi nomumwe ari vakapakata hwokugadzira mudonzvo nenyanzvi kupa Mapisarema michina uye zvemberi hwokugadzira planfor inodzidzisa, zvikuru nenguva kupa vanoshandisa tiine unhu pashure kutengeswa basa. Pashure saleservice kambani kudzimbahwe runhare: 13868185226/13588050818
The midziyo chokugadza pakutuma nguva, boka maererano chibvumirano uye akabvuma kupa ukama mabasa.
Iye akapiwa telex kana runhare vanoshandisa, kambani vatengi servicedepartment achaita nokukurumidza kupindura, kana zvakafanira pashure vashandi Sale webasa anogona kusvika anoishandisa pamusoro-nzvimbo michina kugadziriswa.
Tinosimbisa mushandisi zvinyorwa, batsira User midziyo utariri; kugara vanoishandisa yokutsiva akapfeka zvikamu, uye tarisa midziyo uye nyaya zvinoda kugadziriswa; akamisa vatengi mabasa faira zvinyorwa, nokuti kwerunyararo uye yokuchengeta inodzidzisa akasununguka nhungamiro michina.
The kunyunyuta dzenhare: kana muri nedanho nekuita kambani officeshave chero asina kugutsikana, unogona kukamurwa yokutengesa utariri centre polyempty mune mitemo nokushanda maawa dhayira mu zvichemo Tel: 13868185226/13588050818